Best pole ụgbọala isi Manufacturer na Factory | Okwu
Ejikọtara gearbox n'ime isi ebu, nke na-eme ngwaọrụ mbugharị maka moto, gearbox, pole na otu. Ogo sitere na 4 ruo 100, ike site na 15kW ruo 500kW. Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị na-ebugharị pụrụ iche maka ndị na-ebufe chọrọ ịkwaga. Pole mbanye isi ike mbanye pole, laa azu pole, helical gia, moto isi. Zọpụta njikọta, mee kọmpụta kọmpat, na ịrịgo dị mfe, mkpọtụ dị ala, ntụkwasị obi dị elu, mmezi dị mfe. Na akwa abrasive na-eguzogide roba maka ọrụ ndụ ogologo oge. Kwadobe bụ l ...
Ejikọtara gearbox n'ime isi ebu, nke na-eme ngwaọrụ mbugharị maka moto, gearbox, pole na otu. Ogo sitere na 4 ruo 100, ike site na 15kW ruo 500kW. Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ndị na-ebugharị pụrụ iche maka ndị na-ebufe chọrọ ịkwaga.
Pole mbanye isi ike mbanye pole, laa azu pole, helical gia, moto isi. Zọpụta njikọta, mee kọmpụta kọmpat, na ịrịgo dị mfe, mkpọtụ dị ala, ntụkwasị obi dị elu, mmezi dị mfe.
Na akwa abrasive na-eguzogide roba maka ọrụ ndụ ogologo oge.
Gears bụ obere carbon alloy dị elu nke na-eguzogide ihe, na-eji caburizing, na-eme ka ike gwụ HRC 58-62, na ala dị elu na-aghọta obere mkpọtụ, ikike dị elu, ndụ 100000 awa.
Poul osisi na alloy ígwè na Quenching na tempering ka HB280-315 na elu na-eguzogide.
Okpokoro nwere ntụkwasị obi dị elu
Pulley lagged na RIT akwa nguzogide roba.
Emere mgbakọ Fox Head Pulley maka ọtụtụ ikike ikike dị iche iche.
Isi pulley drive kwesịrị ekwesị maka ihe ebuga nke Silica Sand nke bụ ezigbo, oke aja nke ejiri arụpụta kristal na ihuenyo mmetụ nke ekwentị mkpanaaka ebe enweghị igwe nwere ike ịdị, a na-ejikwa ya na turbines gas.
Ezubere Mgbakọ Pulley Ndị a n'ụzọ ha dị ka e wee nwee ike ịkwaga ha site n'otu ebe gaa na ebe ọzọ dị ka ogo ngwaahịa a na-egwupụta dị iche.
FOX Bliss na-emepụta ihe eji emepụta mbụ
1500 usoro mbanye isi
Isi 2000 gbanye isi
1200 usoro mbanye isi dị
Pully obosara 58 ”maka 52” ihu pole belt
Pully obosara 52 ”maka 46” ihu pole belt
Anyị nwekwara ike hazie pole mbanye maka ngwa pụrụ iche.
Ngwaahịa anyị ejirila nke ọma na Australia, Chile, South Africa. A na-ejikarị ya maka dochie anya isi bliss Fox.
Anyị na-eji teknụzụ emelitere nke gia iji mee ka isi nke ike, ike dị elu, ibu dị ala.
Nke gara aga: ụwa gearboxes
Osote: F usoro ulo oru helical yiri aro ndokwasa gearmotors
Factory Free sample China NBR / Pu / Silicone Mater ...
Pụrụ ịdabere soplaya China Takeuchi Tb125 Track Dr ...
OA Certificate China Rubber inggwakọta Mill, Rubber ...